अहिलेको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया नै विश्वसनीय र भरपर्दो देखिएन | Aaja ko Shiksha
अहिलेको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया नै विश्वसनीय र भरपर्दो देखिएन
प्रमुख, एकता बुक्स एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स, थापाथली, काठमाडौं
सरकारले नयाँ बनाएको पाठ्यक्रम प्रारुपमा पुस्तक व्यवसायीहरुको विमति सुनियो, प्रश्न कहाँनेर हो ?
पाठ्यक्रम परिवर्तनमा हाम्रो असहमति होइन । असहमति त निर्माण प्रक्रियामा मात्रै हो । पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनै पथ्र्यो । दुई दशकदेखि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन सकेको थिएन । यो त झन् ढिला भएको हो । समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नै पर्नेथियो । त्यसैले यो स्वागतयोग्य नै छ । तर, यसको तयारीमा यथेष्ट गृहकार्य नभएको हामीले पायौं । अर्कोतिर विषयविज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल र परामर्श नगरी हचुवाको भरमा ल्याइयो । यसबारे सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा गर्दा पनि यसबारे प्रष्ट कुरा आएन । ‘मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको हो, हामी काम गर्दैछौं’ भन्नेखालको जवाफ आयो । फेरि ‘उहाँहरु पाठ्यक्रम बनाउँदैछौं, यसै वर्षदेखि लागू गर्छौं’ पनि भन्नुहुन्छ । एसइइको नतिजा त तुरुन्तै आउँछ । लगत्तै कक्षा ११ र १२ मा भर्ना खुलेर पढाइ शुरु हुन्छ । कि कुनै व्यक्ति विशेषले पाठ्यक्रम बन्नुभन्दा अगाडि नै पाठ्यपुस्तक तयार पारेर राखेको छ । होइन भने त तयारीका लागि महिनौं लाग्ने काममा सरकारले किन झुठो बोलिरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दापनि केही दिनमै, रातारात, एकै महिनामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार हुने होइन । पाठ्यक्रम तयार भइसकेपछि सेलेवस वा विषयवस्तु विकास गर्नु पर्छ । के विषयवस्तु राख्ने निधो भएपछि मात्रै पाठ्यपुस्तक लेखिन्छ ? यहाँ त पाठ्यक्रम नबन्दै पाठ्यपुस्तक आउने डर भयो । हामीले यस विषयमा फरक मत राखेका हौं ।
के हुनुपर्ने थियो ?
पाठ्यक्रम प्रारुप बल्ल बनेको छ । त्यो पनि मन्त्रिस्तरबाट मात्रै पारित भएको अवस्था छ । त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनै बाँकी छ । पाठ्यक्रम त बन्नै बाँकी छ । पाठ्यक्रम नबनेसम्म सेलेवस बन्ने कुरा भएन । सेलेवस वा विषयबस्तुको निधो नभएसम्म पुस्तक तयारी कसरी हुन्छ ? यसै विषयको जानकारीका लागि शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जाँदा हामीले गतिलो जवाफ पाएनौं । हामीले मात्रै होइन, पाठ्यक्रम विशेषज्ञहरुले पनि पाएका छैनन् । कर्मचारीहरु स्वयं अन्योलमा छन् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अन्योल, खेलवाड हुनु हुँदैन । तल्लोस्तरसँग छलफल गरेर, हरेक सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् छलफल र सुझाबका आधारमा पर्याप्त तयारीका साथ मात्रै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिनु पर्छ । सिमित व्यक्तिले कोठाभित्र बसेर बनाएको पाठ्यक्रमले भोलिको पुस्ताको भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन ।
तपाईँसँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि भएकाले भनिदिनुस् कि वास्तवमा पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुनु पर्छ ? अन्त कसरी हुने गर्छ ?
छिमेकी देश भारत या अमेरिका वा बेलायतलाई हे¥यौं भने पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया फरक–फरक पाइन्छ । बेलायतले विभिन्न विषय र क्षेत्रका पुराना र नयाँ पुस्ताका विज्ञहरुलाई समेटेर पाठ्यक्रमको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् । विभिन्न व्यक्ति र समुदायको सुझाब लिएर खाका तयार पार्छन् । फेरि त्यसलाई छलफल गर्दै काँटछाँट र थपथाप गर्छन् । त्यो फाइनल भएपछि बल्ल त्यसका लागि आवश्यक विषयवस्तु वा सेलेवस तयार गर्छन् । कुन कक्षालाई कुन क्षेत्र र तहको ज्ञान दिने तय हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न विशेषज्ञ व्यक्ति र समूहहरुलाई पुस्तक लेख्न दिइन्छ । पुस्तक डमी आएपछि सम्पादक र विज्ञहरुले भाषा र विषयवस्तुको सम्पादन गर्छन् । अन्तिममा फाइनल भएपछि बल्ल पुस्तक छपाइमा जान्छ । अनि पहिले निश्चित विद्यालयहरु छनौट गरेर ती पाठ्यपुस्तकहरुलाई पाइलटिङको रुपमा लागू गरिन्छ । त्यसका लागि शिक्षकहरुलाई तयार पारिन्छ । अन्त्यमा पाएको फिड्ब्याकलाई आधारमा बल्ल सबै ठाउँमा लागू गरिन्छ । यो प्रक्रियामा लागि दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । २ देखि ५ वर्षसम्म विभिन्न परीक्षण गरेपछि बल्ल लागू गरिन्छ । पाँच वर्षका लागि मात्रै । यूरोपको जस्तै भारतमा पनि प्रक्रिया यही नै हो । भारतमा सामाजिकबाहेकका अन्य विषयमा खासै परिवर्तन गरिन्न । सुधार मात्रै गरिन्छ । एउटा कोठामा बसेर बनाइन्न । हरेक राज्य र विषयका विज्ञहरुको व्यापक छलफल र सहभागितामा मात्रै बनाइन्छ । यहाँ त पाठ्यक्रम नै आएको छैन, पाठ्यपुस्तक अनिवार्य भइसकेको छ । पाठ्यक्रम कस्तो आउँदैछ भनेर न पुस्तक लेख्नेलाई थाहा छ न त सम्पादक वा हामी पुस्तक छाप्नेहरुलाई नै । कम्तिमा एक वर्ष त पुस्तक लेख्नै समय लाग्छ । शिक्षा खेल मैदान होइन नि । यहाँ कसैलाई खेलवाड गर्ने छुट हुनु हुँदैन । राष्ट्रका भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँ हो ।
अहिले बनेको पाठ्यक्रम प्रारुपमा के–के दोष देख्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा यसको निर्माण प्रक्रिया नै विश्वसनीय र भरपर्दो भएन । कक्षा ११ र १२ मा कर्मश पढ्ने विद्यार्थीलाई ४ विषय अनिवार्य गरिएको छ । तीनवटा मात्रै ऐच्छिक बनाइएको छ । चार अनिवार्य विषयमा पनि नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा राखिएका छन् । तर, उनीहरुले विगतमा चारवटा ऐच्छिक विषय पढ्दै आएका थिए । अब तीनवटा मात्रै विषय लिनुपर्ने भएको छ । कसैले अर्थशास्त्र, कसैले व्यवस्थापन, कसैले मार्केटिङ छाड्नुपर्ने भएको छ । तर, चार विषय अनिवार्य हुनु पर्छ । एउटा विषय घटाउनै नमिल्ने देखिन्छ । पाठ्यभार ७ विषयको ७०० पूर्णाङ्क बनाइएको छ । त्यस्तै, विज्ञान पढ्नेले गणित पढ्नै नपाउने देखिन्छ । विज्ञान विषय पढेर इञ्जिनियर, पाइलट, प्राविधिक, वैज्ञानिक बन्न चाहने विद्यार्थीका लागि गणित अनिवार्य हुनुपर्ने हो । यो पनि त्यहाँ छुटेको देखिन्छ । पाठ्यक्रम हेर्दा सरकार विज्ञान, प्राविधि, व्यवस्थापनभन्दा पनि शिक्षा विषयतर्फ फोकस भएको पो हो कि ? विश्वविद्यालयको द्वार भनेको कक्षा ११ र १२ नै हो ।
यसैमा अल्मलाउने हो भने माथिल्लो तहमा झन् समस्या आउन सक्छ । अनिवार्य चार विषयमा सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा राखिएको छ । जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य नगरेर ऐच्छिक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । किनभने सबै विषय नै जीवन उपयोगी हुन्छन् । ११ र १२ मा सामाजिक अनिवार्य गरेर के–के सिकाउन खोजेको हो ? हामीले बुझ्नसकेका छैनौं । १० कक्षासम्म जे जसरी पढेपनि ११ र १२ मा विश्वविद्यालयको लागि तयार हुनु पर्छ । हामीले व्यापारी दृष्टिकोणले मात्रै भन्दापनि नागरिकको हिसाबले पाठ्यक्रममा यहाँनेर गल्ति भयो भनेर सरकारी निकायहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं । प्रकाशक संघ, लेखक संघ, कपिराइट संघलगायतसँग पनि छलफल गरेको भए वेश हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । सरकार किन हतारिएको हो ? यसका लागि पर्याप्त तयारीका साथ पो अघि बढ्नु पर्छ त । हामीकहाँ ११ र १२ कक्षा होस् या स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर गएका हाम्रा विद्यार्थी संसारका सबै विश्वविद्यालयहरुमा फिट भएका छन् । अहिलेको पाठ्यक्रम परिवर्तनले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई समस्या हुन सक्छ । हाम्रा विद्यार्थीले सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा पढेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सरकारले पाठ्यपुस्तकमा एकाधिकार गर्नु ठीक होइन ।
सरकारले पाठ्यपुस्तकमा सिण्डिकेट लगाउन खोज्यो भन्नखोज्नुभएको हो ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफैं पाठ्यक्रम बनाउने, आफैं पुस्तक छापेर बेच्न खोजेको देखिन्छ । यसले सरकारले पाठ्यपुस्तकमा आफैंले सिण्डिकेट लागू गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका हुन्छ । सरकार एकातिर बहुपाठ्यपुस्तक नीतिको कुरा गर्छ, अर्कोतिर एउटै पाठ्यपुस्तकको नीति बनाउँछ । बहुपाठ्यपुस्तकमा नगई हुँदैन । पब्लिक पार्टनरसिपमा नगई हुँदैन । हामीले विदेशबाट मगाउनुपर्ने पुस्तक मगाइसकेका छौं । एक दुई महिना लाग्छ आउनै । पुस्तकहरु जिल्ला जिल्ला पठाइसकेका छौं । एसइइ दिनेबित्तिकै विद्यार्थीले किताब किनेर पढ्न शुरु गरिसकेका हुन्छन् । हामीले छाप्नुपर्ने छापिसकेका छौं । यतिखेर आएर पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो, नयाँ सेसनमा नयाँ लागू हुन्छ भनेर झ्याली पिट्न थालेको छ सरकार । यसमा हाम्रो विमतिभन्दा पनि आपत्ति हो ।
तपाईँहरुको विमति पाठ्यक्रम निर्माणमा आफ्नो सहभागिता नभएर हो कि पाठ्यपुस्तकमा सिण्डिकेट लाग्यो भनेर हो ?
हाम्रोतर्फबाट सरकारलाई दुईटा कुरा भनेका छौं । अहिले बनेको पाठ्यक्रम अनुसार सरकार आफैंले पाठ्यपुस्तक बनाउँछु भन्नु ठीक हो त ? सरकारले सबै जिम्मा लिए हाम्रा प्रकाशन उद्योग बन्द गरे हुन्छ । सरकारले आफैंले छापेका पुस्तकहरु मात्रै पढेका हाम्रा विद्यार्थीले विश्वका अन्य विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । एउटा पुस्तकमा सीमित भएर हुँदैन । संसारभरका राम्रा पुस्तक पढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो चासो चिन्ता र विमति व्यापारमा भन्दा विद्यार्थीको भविष्यप्रति हो ।
निजी पुस्तक व्यवसायीहरुलाई कहिलेदेखि विद्यार्थीको चिन्ता हुन थालेको हो ?
विद्यार्थीले आफ्ना लागि चिन्ता गर्नसक्ने भएका छैनन् । उनीहरु काँचा माटो हुन् । अब चिन्ता लिनुपर्ने सरकारले नै लिन छाडेपछि हामी चुप लागेर त भएन । हामीहरु व्यापारी मात्रै होइनौं । अभिभावक पनि हौं । अझ मुलुकको नागरिक हौं । पाठ्यपुस्तक वा पुस्तक व्यवसाय अन्य भन्दा फरक खालको व्यवसाय हो । मैले आफू कलेज पढ्दा पुस्तक नपाएर पुस्तकालयबाट सारेर पढेको हुँ । मैले पुस्तक व्यवसाय गर्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । अहिले त्यो समस्या छैन । पहिले सबै पुस्तकहरु भारतबाट आउथ्यो । हाम्रो ‘देश भारत हो, हाम्रो राष्ट्र पिता महात्मा गान्धी’ भनेर पढ्नप¥थ्यो । अहिले यो अवस्था नआउनुको कारण पुस्तक व्यवसाय फैलनु नै हो । पुस्तक व्यवसायीको अन्य स्वार्थ छैन । हामी व्यवसायी हौं, यो नभए अरु गर्छौं । हामीलाई कुण्ठित गर्ने होइन, प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
पुस्तक व्यवसायीहरुको योगदानको शिक्षा मन्त्रालयले अवमूल्यन गरेको हो या अन्य कुनै बार्गेनिङ गरेको हो ?
अवमूल्यन नगरेको भनौं भने हामीसँग छलफल नै गरेन, वास्तै गरेन । गरेको भनौं भने कसरी भनौं ? १–५ को पुस्तक पनि निजी क्षेत्रले छापेर वितरण नगरिदिएको भए जनक शिक्षाले गर्नैै सक्ने थिएन । जनकले जिम्मा लिएका स्थानमा अझै पुस्तक पुगिरहेको छैन । १–१२ कक्षाको सरकार आफैंले गर्छु भन्नु सम्भव विषय नै होइन । विद्यार्थी र अभिभावकमाथि खेलाँची मात्रै हो । एकाइसौं शताब्दीमा सम्पूर्ण विषय सरकारीकरण गर्ने, सरकार आफैंले गर्छु भन्नु सम्भव नै छैन । सरकार खुला बजार र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जानै पर्छ । चीनलाई हेरौं न । नेपालको शिक्षालाई आज यूरोप अमेरिका सबैले मानेको छ । पछि नमान्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । सरकारले त पाठ्यक्रम बनाएर यो अनुसार यो मापदण्डमा रहेर पुस्तक तयार पारेर आउनुस् भनेर भन्नुप¥यो नि । बहुपुस्तकको अवधारणामा जानु प¥यो नि । पहिले पनि हामीलाई गरेकै हो । १–४ कक्षाको एउटा किताबको १५ हजार रुपैयाँ, ४–८ को १७ हजार, ९–१२ को २० हजार सब्मिशन शुल्क दिएर सब्मिशिन गराएको छ हामीसँग । ती किताबको स्वीकृति अब के हुन्छ ? अब पाठ्यक्रम बनाएर बहुपाठ्यपुस्तकमा गएर बजारलाई फ्रि छाडिदिने हो भने सरकारलाई नि सहज हुन्छ । हामीहरुलाई पनि बाँच्ने आधार हुन्छ । उपभोक्ताहरुले पनि सही कुरा सही समयमा प्राप्त गर्छन् । व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण राष्ट्रलाई भिक्टिम बनाउन पाइदैन ।
कक्षा ११ र १२ लाई पूर्वविश्वविद्यालय शिक्षाभन्दा पनि विद्यालय शिक्षाको अन्तिम मात्रै बनाउन खोज्यो भन्ने तपाईँहरुको आरोप हो ?
हो, अहिलेको पाठ्यक्रममा पाठ्यभारको सही समायोजन देखिन्न । कक्षा ११ र १२ र स्नातक तहको कोर्स मिलेको देखिन्न । विद्यार्थीलाई पछि समस्या हुने देखिन्छ । त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ । हिजोका विद्वत्त वर्गलाई पनि पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्छ । आजका नयाँ सूचना प्रविधि बुझेकालाई पनि राख्नुप¥यो । यी दुईको घनीभूत छलफलपछि मात्रै पाठ्यक्रम बन्नु पर्छ । बनिसकेपछि प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिनु पर्छ । यो हुनसकेको छैन । होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ११ र १२ मा १६९ विषय छ जस्तो लाग्छ । १६९ मा ४ अनिवार्य विषय मात्रै सरकारले छाप्ने र त्यही ४ विषयमा मात्रै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । ऐच्छिक विषयहरुमा सरकारको ध्यान देखिन्न । खासमा जीवन उपयोगी भनेको त्यही विषय हो । ऐच्छिक विषयमा मात्रै सिमित हुन निजी क्षेत्र चाहँदैनन् । अनिवार्य पुस्तक छाप्ने मौका पनि पाउनु पर्छ ।
अनिवार्य विषयको जिम्मा नपाए ऐच्छिक विषय मात्रै निजीले छाप्दैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, ऐच्छिक सबै बिक्दै बिक्दैनन् । कुनै २० प्रति, कुनै ५० प्रति त कुनै कुनै १०० प्रतिको हाराहारीमा मात्रै बिक्छन् । बढीमा कुनै ८÷९ सय बिक्छन् । त्यति पुस्तक छापेर कसरी टिक्ने ? नबिक्ने भएपछि ती पुस्तक छाप्नमा किन लगानी गर्ने ? सरकारले पनि नगर्ने निजीले पनि नछाप्ने भएपछि पीडित विद्यार्थी हुने भए । विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफैं पाठ्यक्रम बनाउन थालिसकेका छन् । केहीले त छपाइको टेण्डरको कुरा गर्न थालेका छन् । केन्द्रले बनाएका पाठ्यक्रम त्यहाँ लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो चिन्ता छ । हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकलाई किन हतारमा ? भनेर सोध्दा मन्त्रीले एक महिनाभित्र नयाँ पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ भन्नुभएको छ भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनुहुन्छ । पञ्चायतकालमा हामीलाई राष्ट्रनिर्माणको अंग भनेर सम्मान र पुरस्कृत गरिएको थियो । लोकतन्त्रमा हामीमाथि प्रहार मात्रै भएका छन् । सम्मान त परै जावस्, काम गर्न पनि दिइएको छैन ।
नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्छौं भनेर तपाईँहरुसँग रहेका करोडौं पुस्तकको चिन्ता देखाएर रकमको बार्गेनिङ गर्न खोजिएको पनि आरोप लागेको छ नि ?
केदारभक्त माथेमा सरहरुले पनि यसरी गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाएपछि अन्य विज्ञ व्यक्तिहरुको सुझाबसमेत समेट्ने गरी पाँच दिन पाठ्यक्रम प्रारुप इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरियो । पाँच दिनमा सुझाब दिन सकिन्न । अध्ययन गर्नुप¥यो । हामीले संघ र महासंघमा गएर हतार–हतार अध्ययन गरी सुझाबसमेत दियौं तर लागू भएन । कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा यसो गरिएको हो भने देशका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । मसँग व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक बार्गेनिङ गरिएको छैन । अन्य साथीहरुका बारेमा बुझेको छैन । यदि अन्य साथीहरुसँग आर्थिक बार्गेनिङ गरिएको भए दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।